#myanmar Trending Posts - PALnet
My sketch (47)
အသွားအပြန် ဆီထည့်ရန် ယနေ့ မြို့ထဲ ပင်စင်သွားထုတ်သည်။ မန္တလေးမြို့က ပြန်လည် စည်ကားနေသည်။ ဈေးဆိုင်အားလုံးနီးပါးဖွင့်သည်။ ကုမ္ပဏီများလည် ဖွင့်လှစ်၍ စည်ကားနေသည်။ ဆေးရုံကြီးအနီးရှိ ဆေးဆိုင်များ
Mala Fried Noodles: For Lunch. Everyone in ASEAN Hive , hello again. How's your day? I was extremely lazy this afternoon. I didn't know what to do to be active and motivated. Nothing special to do and so I…
Reflection of the Mandalay palace moat, Myanmar Hello friends, I would like to present the photographs of Mandalay palace moat with its reflection shadows on the moat water. Mandalay palace is located in Mandalay, Myanmar and…
Reflections #myanmar #reflections #trafficinsider #neoxian #archon #a ... Reflections #myanmar #reflections #trafficinsider #neoxian #archon #ash #palnet #creativecoin Posted via
အလေ အလွင့် ကျုပ်တို့ မြန်မာပြည်ကြီးမှာ အလေအလွင့် အတော်ပေါသား။ အလေအလွင့်ကိုတောင် ကြွားပြီးသီချင်းလေးတောင်ဆိုထားသေး။ "ဆီကိုရေချိုး ဆေးရိုးမီးလှုံ"ဆိုတာ။ အမှန်ကတော့ ပေါများတယ်ဆိုတ
My experience on clear mindedness Hello Friends! This is my first post in this community. I am Sao from Myanmar. Yesterday, I was reflecting upon the five elements that can defile our mind and became to realize…